Universal Online TV | नेताको मन जितेका बिष्णु पौडेललाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’ ! नेताको मन जितेका बिष्णु पौडेललाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’ !
नेताको मन जितेका बिष्णु पौडेललाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’ !
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएपछि अर्को कोठातिर आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिष्णु पौडेललाई भने, ‘ल बधाइ छ’ ।
पौडेलसँगै अरु केही नेता कार्यकर्ता पनि थिए । के को लागि बधाई ? ओलीले जवाफ दिए-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेकोमा ।
पाैडेल केही बोलेनन्, एकप्रकारको आश्चर्यमिश्रति भावमात्र देखाए । एमालेकै बरिष्ठ नेताहरुका लागि पनि त्यो एकप्रकारको सरप्राइज थियो ।
यद्यपि पार्टी एकताका सूत्रधार पौडेल ९ सदस्यीय हाइकमाण्डमा पर्ने कुरा चाहिँ अघिल्लै दिन शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भइसकेको थियो ।
संयोजन समितिले नेकपाको हाइकमाण्डका रुपमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय बन्ने निर्णय गरेपछि सबैले नवौं सदस्य को होला भनेर सोध्न थाले । कतैबाट पनि जवाफ आएन ।
संयोजन समितिमा तत्कालीन एमालेका ५ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ३ सदस्य रहेकाले थपिएका एकजना माओवादीको हुनुपर्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । अनलाइनखबरले सबैभन्दा पहिले बिष्णु पौडेल महासचिव बन्ने खुलासा गर्दा कतिपयले पत्याउन समेत चाहेनन् ।
तर, वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरणसम्मका प्रमुख सूत्रधार पौडेल शक्तिसाली कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा प्रवेशसँगै महासचिव समेत बनिसकेका थिए ।
बिधानमा दुई अध्यक्षमात्र रहने र अरु पदाधिकारी नहुने भनिएका बेला महासचिवमा बिष्णु पौडेलको इन्ट्री आफैंमा महत्वपूर्ण परिघटना थियो ।
यसबारे तत्कालीन एमालेका केही नेताले ओलीलाई सोधे पनि । घनश्याम भुसालका अनुसार ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ भनेर नेताहरुले जवाफ दिए ।
तत्कालीन एमालेभित्र नवौं वरियतामा रहेका पौडेल एकीकृत पार्टीको पनि नवौं वरियतामै पर्न सफल भए । तर, उनले बरियतामा मात्र होइन, महासचिव पदमै छलाङ मारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो पुस्ताको पहिलो नेताको स्थान सुरक्षित गरेका छन् ।
शीर्ष बरियताका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमको चाहनामा पौडेल शक्तिशाली महासचिव बनेको अब लुकाइरहनु परेन । पौडेल पार्टी एकताका सूत्रधार मात्र थिएनन्, पार्टीभित्रै ओली, नेपाल र गौतमबीच एकता गराउने सूत्रधार पनि बने र सरप्राइज गिफ्टका रुपमा महासचिव पद पाए ।
पौडेल पार्टी एकताका सूत्रधार मात्र होइनन्, नेताहरु मिलाउने सूत्रधार पनि हुन् । नवौं महाधिवेशनअघि नै ओली र बामदेवलाई मिलाएर ओली युगको सारथी बनेका पौडेल पछिल्लो समय ओली र माधव नेपालबीच विश्वासको वातावरण बनाउन खटिएका थिए ।
यसक्रममा उनले माधव नेपालसँग आफ्नै निवासमा ‘लन्च मिटिङ’ समेत गरेका थिए । ओली अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्ष पनि नउठ्ने र अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री पनि नदोहोरिने भएकाले दूरी बढाएर होइन, विश्वासमा रहेर काम गर्न उनले नेपाललाई प्रेरित गरे ।
यसबीचमा ओली र प्रचण्डबीच पटक पटक विश्वासको संकट हुँदा पौडेल दूत बनेर खुमलटार र बालुवाटार ओहोरदोहोर गरिरहे । दुवैतर्फका निर्णायक नेताहरुको विश्वास जित्न सक्नु पौडेलको खुबी रहृयो, जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष ९ मा उनको प्रवेश भयो ।
पौडेलको छलाङ उनका समकालीन र कतिपय सिनियर नेताहरुलाई पनि पचेको छैन । भीम रावलले नेताहरुसँग खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुईपटक एमालेको महासचिव भइसकेका र ओलीको उत्तराधिकारी बन्न खोजेका ईश्वर पोखरेल केही बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।